Baladweyne: Ciidamada dowladda oo qabtay dad loo heysto dilka Cabdi Iidow Sabriye (DHAGEYSO) | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Baladweyne: Ciidamada dowladda oo qabtay dad loo heysto dilka Cabdi Iidow Sabriye (DHAGEYSO)
Arbaco, Feb, 7, 2018(HNN) Ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeyeen dilkii allaha unaxariiste gudoomiyihii hore ee degmada Bula burde Cabdi Iidow Sabriye loogu geystay magaalada Baladweyne habeen ka hor.
Taliyaha qeybta Booliska gobolka Hiiraan Col Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay qabteen dhowr qof oo lagu tuhumayo dilka loo geystay Cabdi Iidow Sabriye iyo qaraxii ka dhacay magaalada Baladweyne islamarkana la sheegay inu ku dhintay qofkii Aasayay.
Col Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in dadkan la hayo baaritaan lagu wado hadii lagu helo dambiga sharciga la horkeeni doon balse hadii wax dambi ah lagu waayo la sii deyn doono.
Ciidamada dowladda ayaa howlgalo lagu xaqiijinaayo amaanka ka wada magaalada Baladweyne ee xaruunta gobolka Hiiraan si looga hortago falalka amaanka lidiga ku ah.
Habeen ka hor ayaa xaafadda Xaawo Taako gaar ahaan laanta Nuur Xawaad ayaa waxaa ka dhacay dil loo geystay mid ka mid ah gudoomiyashi soo maray Bula burde haddana ka mid ahaa culumada tabliiga Cabdi Iidow Sabriye iyo qarax u ku dhintay qof la sheegay inu aasayay.